Rafitra fampahalalana jeografika: horonantsary fanabeazana 30 - Geofumadas
Janoary, 2015 Fampianarana CAD / GIS, jeospatial - GIS, Pirinty voalohany
Ny geolocation intrinsika saika amin'ny zavatra rehetra ataontsika, amin'ny fampiasana fitaovana elektronika, dia nahatonga ny olana GIS maika hampiharina isan'andro. 30 taona lasa izay, ny firesahana momba ny fandrindrana, ny làlana na ny sarintany dia raharahan-javatra nitranga. Ny manampahaizana manokana momba ny sarimiaina na ny mpizahatany no tsy nampiasa afa-tsy saritany nandritra ny dia iray.
Androany, ny olona dia mijery sarintany avy amin'ny fitaovan'ny findainy, manisy marika ny toerana avy amin'ny tambajotra sosialy, miara-miasa amin'ny fanaovana sarintany nefa tsy fantany akory, ary mampiditra tontolon'ny habaka amin'ny lahatsoratra iray. Ary izany rehetra izany dia tsara ho an'ny sehatry ny GIS. Na dia mbola sarotra aza ny fanamby, satria mbola fitsipi-pifehezana izay idiran'ny siansa maro, samy manana ny fahasarotana avy any an-danitra ka hatrany amin'ny helo izy rehetra.
Ho avy ny fotoana izay hanjary mahazatra ny fampiasana fampahalalana ara-jeografika. Ary tsy miresaka fampisehoana sarintany no tiako hambara, fa ny miantso ny sosona, manao azy ireo, mamorona buffer, manao modely ny tontolo 3D. Ho an'izany, ilaina ny manasaraka ny fahaizan'ny fampiasana azy, ary koa ny fampiasana telefaona finday anio; tsy misy olona mazoto miasa amin'ny fifehezana rehetra amin'ny famelabelarany. Mandritra izany fotoana izany dia ilaina ny mianatra avy amin'ny GIS. Mihoatra noho ny fampiasana fitaovana iray, fantaro ny fototry ny fizotran'ireo angona cartografika, manomboka amin'ny famokarany ka hatramin'ny fahazoana azy ho an'ny mpampiasa izay hanome valiny.
Fahafinaretana ho ahy ny manolotra ireo andian-dahatsary miompana amin'ny fanabeazana amin'ny andian-tsarimihetsika Geographic Information Systems. Mety ho an'ireo izay te-hahatakatra ny ifotony, ny fitsipika, ny fampiharana ary ny fironana amin'ny GIS, novolavolaina tamina horonantsary 30 voafintina amina fizarana sary tsy mihoatra ny 5 minitra.
Ireo toetra mampiavaka ny SIG
Fampiasana ny jeografia ao amin'ny GIS
Fampiasana: The Cadastre Fiscal
Mampiasà tranga: fitantanana ny tany
Mampiasà tranga: Planina momba ny faritra
Mampiasà tranga: Risk Management
Hevitra ankapobeny momba ny jeografia azo ampiharina amin'ny GIS
Hevi-bahoaka momba ny jeografia: rafitra rafitra
Hevitra ankapobeny momba ny jeografia: solontena modely
Hevi-dehibe momba ny jeografia: singa fototra amin'ny sarintany
Foto-dresaka momba ny fizotry ny karajia
Ara-teknika amin'ny fampiasana ny GIS
Andraikitry ny fahamendrehana sy ny kalitao
Ny fahasamihafana eo amin'ny CAD sy GIS
Fakana sary momba ny saha: fomba fitiliana
Ny fampiasana GPS mba hahazoana vaovao misokatra
Sary avy eny an-tanety sy zanabolana azo ampiharina amin'ny GIS
Sary avy eny ambony
Ny famaritana sary ny sary
Ny fampiasana ny fitaovana fandefasana sary amin'ny zanabolana
Fampiharana momba ny fahita lavitra
Fampandrosoana teknolojika amin'ny fampiasana ny GIS
Famoahana angona amin'ny Internet
Ireo mpijery an-tserasera
Ny fanambin'ny matihanina matihanina
Ny asan'ny profesora GIS
Ny famoahana ny vaovao
Ny votoatin'ny fandrosoana ara-teknolojia
Ny fampiharana tsikelikely ny teknolojia ao amin'ny GIS
Ny rindrambaiko manokan'ny fampiasana GIS
Free rindrambaiko amin'ny fampiasana GIS
Ny fandalinana an-tsarintany ny sarintany
Ny fampiasana ireo fenitra ao amin'ny GIS
Satria afaka maimaim-poana izy ireo dia miarahaba antsika Educatina.com sy ny ekipanao. Ho an'ny kofehy iraisana izay manararaotra ny mazava ho azy, dia mamerina amin'ny laoniny mahazatra ary mampiseho ny fahaizany sary ... ny mpanoratra.
Eto ianao dia afaka mahita ireo lahatsary amin'ny endrika Playlist.
Previous Post«Previous Inona no nanjo ny Top40 Geospatial tao amin'ny Twitter
Next Post Maka sary amin'ny Manager for Bricscadmanaraka »